Mikasa ny haka an-keriny ny minisitry ny fizahantany teo aloha Mzembi ve i Zimbabwe?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mikasa ny haka an-keriny ny minisitry ny fizahantany teo aloha Mzembi ve i Zimbabwe?
Ny fitsangatsanganana sy fizahantany any Zimbaboe dia eo amin'ny lalan'ny fanarenana maika dia maika, ary ny firenena dia heverin'ny ankamaroan'ny mpandeha ho faniry sy azo antoka. Na izany aza, misy lafiny maizina amin'ny toe-java-misy ankehitriny any Zimbabwe miaraka amina fihodinan'ny fizahan-tany izay tsy hitan'ny mpitsidika. Tafiditra ao anatin'izany ny minisitry ny fizahan-tany taloha malaza sy hajaina ao Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi.
Zimbabwe no nandroso tsara mba hiorina amin'ny zava-bita ekena eran'izao tontolo izao avy amin'ny minisitry ny fizahantany teo aloha.
Ao Zimbabwe, avelan'ny Mpitsara hanao ny sarin'ny mpampanoa lalàna amin'ny fanjakana, fampisehoana an-tsipiriany momba ny fomba nitadiavan'ny State Agents naka an-keriny sy naka an-keriny an'i Dr. Walter Mzembi tamina hetsika tsy ara-pitsarana iray tatsy Afrika Atsimo. Tsy menatra amin'ny lalaon'izy ireo, hiseho izany.
Mijanona miaraka aminay. Sarotra ny tantara Dr. Walter Mzembi.
Ny mpampanoa lalàna Brian Vito avy ao amin'ny Sampana fanenjehana manokana an'ny filoham-pirenena, birao iray izay nitatitra mivantana tamin'ny filoham-pirenena vaovao Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, no nanao izany. Nahita hyperbole tany amin'ny fitsarana izahay ary nahafantatra hery manokana sy maizina miasa amin'ny firenena mifanila aminy hitondra an'i Mzembi amin'ny vidiny rehetra. Ity rafitry ny fampanoavana ity dia toa nanjary fitaovam-pamaliana sy valifaty ho an'ny filoha mikorontana, izay manana fandaharam-potoana lava hanasaziana ireo rehetra izay nanohitra ny fifaninanana henjana ho an'ny asan'ny Zimbaboe tamin'ny 2017.
Fampahalalana tsy notaterin'ny tompon'andraikitra iray, ny haino aman-jery ao an-toerana dia noraisin'ny fanjakana ho toerana tsy mitombina, tsy marina ary mpamaly faty mifandraika amin'i Dr. Walter Mzembi. Ny mahavariana, taorian'ny nangatahany ny rakitsorany ara-pitsaboana, dia nambaran'ny mpampanoa lalàna fa maty izy ary nitantara tantara momba ny fahafatesany sy ny fandevenana azy.
Vaovao sandoka daholo ireo, tsy marina avokoa. Mzembi dia niatrika sabatika taorian'ny fandidiana, na izany aza, nanjary niharam-boina tamin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana izy, ary mpitsara ny fampanoavana nandritra ny herintaona mahery, ary ny sasany tamin'ity boky ity dia nitantara.
Rehefa manilika ny firaketana sy ny fepetra notaterin'ny fanjakana iray hafa, ny Repoblikan'i Afrika Atsimo, amin'ny alàlan'ny Departemantan'ny Fifandraisana Iraisam-pirenena sy ny Fiaraha-miasa ny mpampanoa lalàna, dia marika mazava izany fa tsy mahomby ny mizana. Ny haavon'ny fankahalana avy amin'ny Governemanta Zimbaboe amin'i Dr. Walter Mzembi dia toa banga sy fanenjehana ara-politika ny voampanga iray izay tsy mino intsony fa azo antoka ny hanaovana fitsarana ara-drariny ao amin'ny faritany onenany.
Mazava fa efa nisy fifanolanana ara-politika tamin'ny Fanjakana tamin'ny alàlan'ny fanenjehana azy, ary tsy ho ara-dalàna na oviana na oviana ny vahaolana fa ara-politika. Ny fanasana ny tombotsoan'ny Interpol amin'ny raharaha politika dia fihetsika famitahana iray hafa ataon'ny Governemanta Zimbabwe izay lasa, tamin'ny famonoana olona, ​​ara-bakiteny. Ampahatsiahivinay anao ny fitifirana ny sivily tsy mitam-piadiana tamin'ny fihetsiketsehana izay nampihozongozona ny firenena tamin'ny volana aogositra 2018 sy janoary tamin'ity taona ity ary nahafaty olona 23 tamina rà mangatsiaka nahitana vehivavy sy ankizy marobe.
Hiverina any Mzembi. Tsy azony atokisana ny rakitsorany ara-pitsaboana hampiasan'ny ekipa mpampanoa lalàna amin'ny fomba mety.
Ampahatsiahivintsika ihany koa ireo mpamaky ny fanakorontanana naseho tamin'i Zimbabwe momba ny tatitra momba ny fahafatesan'ny filoha lefitra, Constantino Chiwenga volana vitsivitsy lasa izay, ary ao koa ireo tantara maro maminavina ny fahafatesany. Mazava fa misy lamina iray any am-piasana, miaraka amin'ireo vaovao tsy marina notaterina tamin'ny olona notsaraina. Mifanohitra amin'izay, tsy misy ny tatitra marina momba ny zava-misy amin'ny alàlan'ny haino aman-jery voafehy ofisialy ao amin'ny firenena.
Mba hanarenana ny zava-misy dia niresaka tamin'i Mzembi ny eTN androany. Mbola marary ihany izy ary mino izahay fa tokony havela ho sitrana tanteraka. Hainay fa mitohy ny fitsaboana homamiadana azy ary dia mirary soa azy izahay amin'ny tolona ho an'ny fahasalamana sy ny fiainana. Mzembi dia manana fianakaviana sy manao fananana any Zimbaboe.
Fantatry ny eTN avy amin'ny loharanom-baovao maro fa tsy misy mpanolotsaina ara-dalàna afaka miantoka ny fiarovana azy raha toa ka miakatra fitsarana izy.
Ny loharanom-baovao dia nanambara, "mividy basy ny kingpins G40 hanonganana ny Governemanta Zimbabwe, tarihin'i Ed Mnangagwa." Ireo fiampangana ireo dia natao ihany koa tany amin'ny Cape Town Press Club nandritra ny WTM Africa.
Voaroaka tamin'ny Governemanta Zimbabwe i Walter Mzembi tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana novambra 2017 ary minisitry ny raharaham-bahin'ny governemanta Robert Mugabe izy. Voaroaka koa izy avy tany Zanu PF noho ny fiampangana fa anisan'ny akanjo lazain'ny antoko hoe cabal G40.
Noho izany dia nambaran'ny fanjakana maty i Mzembi, ary rehefa hita fa velona izy dia voampanga ho anisan'ny kalisy mividy basy hanonganana governemanta iray. Ity no tena fiainana Mzembi fa tsy tantara an-tsary fa tsy foronina.
Ahoana no andrasan'ny fanjakana an'i Mzembi hiaro ireo fiampangana ireo, izay mitondra sazy fanamelohana ho faty, raha tsy salama amin'ny homamiadana izy, miaraka amin'ny fitsarana tribonaly kangaroo miandry azy?
Ny mpampanoa lalàna Brian Vito dia eo amin'ny firaketana an-tsoratra milaza hoe: "Ento miakanjo rojo vy sy vy izy".
Mahagaga fa ny tatitra omaly avy amin'ny mpampanoa lalàna Vito dia nanambara fa nanandrana naka an-keriny an'i Mzembi ny fanjakana, niaraka tamin'ny fanampian'ny Polisy Afrikanina Tatsimo, andrana izay tsy nahomby.
Fifandonana teo amin'ny sampana fampanoavana tena izy ao amin'ny Zimbabwe NPA sy ny Fampanoavana an'i Mnangagwa an'i Brian Vito no voampanga ho nanao fitsabahana mafy sy fitondran-tena tsy mendrika nataon'ny departemantan'ny fampanoavana. Mandritra izany fotoana izany, mijaly any Zimbabwe ny fanatanterahana ny rariny sy malalaka, ary ny sasany amin'ireo niharam-boina dia ny Dr. Walter Mzembi sy ireo mpanohitra kendrena hafa dia mety ho voadona mora foana.
Rehefa niresaka tamin'i Mzembi izahay androany dia naneho hevitra izy hoe: “Mampalahelo fa any Zimbabwe ihany no misy izany zavatra izany. Miady amin'ny fiainako amin'ny homamiadana aho, ary avy eo amin'ny fihodinana faharoa, raha tafavoaka velona aho, dia tsy maintsy miady amin'ny governemanta tsy manahirana sy mamitaka. ”
Dr. Walter Mzembi dia minisitry ny fizahantany niavaka izay nandray anjara betsaka tamin'ny politika momba ny fizahan-tany eran-tany, izy dia Komisiona ho an'ny filoham-pirenena ho an'ny filoha Africa ary filohan'ny fivorian'ny UNWTO tamin'ny 2013-2015. Tompondaka eran-tany fanta-daza izy ary mpanentana an'i Brand Zimbabwe.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany dia mahatsiaro an'i Mzembi tamin'ny nandraisany tamim-pahombiazana ny fivorian'ny UNWTO General Assembly tamin'ny faha-20 tamin'ny 2013 tao Victoria Falls. Niala tamin'ny fizahan-tany manerantany i Mzembi ho mpirotsaka hofidina voalohany ho an'i Afrika amin'ny toeran'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, izay azon'ny Sekretera jeneraly ankehitriny, Zurab Pololikashville.
eTN dia hanohy hanara-maso akaiky sy hanao tatitra momba an'i Zimbabwe sy Dr. Walter Mzembi.
Ady i Afrika atsimo dia manana adidy hanalavitra ireo fitsangatsangana ivelan'ny fitsarana any amin'ny faritaniny amin'ny alàlan'ny fitantanan-draharaha misoloky ny mpanohitra azy ara-politika. I Afrika atsimo dia hita ho toy ny fanilon'ny fahalalahana eto amin'ny kaontinanta sy manerantany - ary hijery izao tontolo izao.